တရား၏ အာရုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တရား၏ အာရုံ
Posted by မောင်မိုးပြာ on Aug 5, 2012 in Copy/Paste | 16 comments
မိမိကိုယ်ကို မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့လည်း မသိ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖြစ်ထက် ကျော်လွန်ရကောင်းမှန်းလည်း မသိခဲ့ရိုးအမှန်ပါ။ အဖေတို့ အမေတို့က သီလ ဆောက် တည်တော့ ကိုယ်လည်းသီလဆောက်တည်၊ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တလို့ဆိုပြီး ပုတီးစိပ်ရတယ် ကြားဖူးလို့ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တဆိုပြီး ပုတီးလည်းစိပ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံးသုံးကြိမ် သရဏဂုံ ဆောက်တည်လျှင် အစစအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုလို့ ဗုဒ္ဓံ သရဏံဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံသရဏဂစ္ဆာမိ၊ သံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိကို နံနက်သုံးခေါက်၊ နေ့လယ်သုံး ခေါက်၊ ညနေသုံးခေါက် ရေသောက်တိုင်း ထမင်းစားတိုင်းမှာ သုံးခေါက် အမြဲမပြတ် ရွတ်ဆို ခဲ့ဘူးပါတယ်။ တစ်နေ့အနည်းဆုံး သုံးကြိမ် သံရဏဂုံဆောက်တည်လျှင် အစစ အောင်မြင် နိုင်တယ်ဆိုလို့ ဗုဒ္ဓံသံရဏံဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မသံရဏံဂစ္ဆာမိ၊ သံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိကို နံနက်သုံးခေါက်၊ နေ့လယ်သုံးခေါက်၊ ညနေသုံးခေါက် ရေသောက်တိုင်း ထမင်းစားတိုင်းမှာ သုံးခေါက် အမြဲမပြတ်ရွတ်ဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်။ ကိုယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာကသာလျှင် အမြတ်ဆုံးလို့ လည်း ခံယူခဲ့တာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုယ်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီး ရပ်တည်လာခဲ့တာပါ။
အသက်၂၃ အရွယ်လောက်မှာ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဟောစဉ်တရားစာ အုပ် တွေကို ဖတ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ပခုက္ကူ ဦးကြင်ရွှေရဲ့ ဟောစဉ်တရားတွေကို နာကြားခွင့်ရခဲ့တယ်။ နှာသီးဝမှာ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် လုပ်နေတဲ့လေကို လေ၀င်သွားတာကို ၀င်သွား မှန်းသိအောင်၊ လေထွက်သွားတာကို ထွက်သွားမှန်းသိအောင် လုပ်တာဟာ စတင် တရားအားထုတ်တာ။ ဒီလိုအားထုတ်ရာကနေ တရားရမှာလို့ ယုံကြည်ပြီး ကြိုကြား-ကြိုကြား လေ၀င်သွားတာကို ၀င်သွားမှန်းသိ အောင် လေထွက်သွားတာကို ထွက်သွားမှန်းသိအောင် စတင်ကြိုးစားနေမိပါပြီ။ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ လက္ခဏာရေး သုံးပါးထင်အောင် အားထုတ်နိုင်ရင် တရားရပြီပေါ့။
ကိုယ်က လူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့ ချမ်းသာကြီးပွားချင်တဲ့စိတ်ကလည်း စိုးမိုးနေတဲ့အချိန် ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ့်ဆွေမျိုး ကိုယ့်ရပ်ရွာကို ဖွံ့ဖြိုးချင်တဲ့စိတ်က စိုးမိုးနေတဲ့အချိန် . . . ဒီအချိန်မှာ ဒီစိတ်တွေနဲ့ “ငါ” ကြီးပွားချမ်းသာရမယ်ဆိုပြီး လူ့လောကထဲကို စတင်တိုးဝင်ခဲ့မိတယ်။
တစ်နှစ်…နှစ်နှစ်..သုံးနှစ်…ခြောက်နှစ်…ကိုးနှစ်…ဆယ့်နှစ်နှစ် လူ့လောကကို စိတ်ပျက်ငြီးငွေ့တာတွေ ရရှိခဲ့လေရဲ့။ ကိုယ်လေ့လာ ဖတ်မှတ် သိမြင်သဘောပေါက်ခဲ့တဲ့ စာပေတွေရဲ့ သဘောတရားအရ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြုပြင်ဖို့ သာသနာ့ဘောင်မှာ တစ်နှစ် တစ်ဝါ ခိုလှုံချင်ခဲ့တာကို တစ်သက်လုံး ခိုလှုံသွားမှာဆိုရင်တာ ခွင့်ပြုမယ်လို့ မိဘတွေက ပြောဆိုတော့ တာပါပဲ။
တွေ့ပါပြီတရားခံ . . . ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ . . . သူငယ်ချင်းဘုန်းကြီးတွေကိုမေး စာချဘုန်းကြီးတွေကိုမေး …ဝေဝေဝါးဝါးနဲ့ပဲ အဖြေတော့ မရခဲ့ပါ။ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ။ တရားအားထုတ် အာရုံပြုရမည့် အာရုံအပြုခံဟာ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ။ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ ရှာပုံတော် ဖွင့်ရပြီပေါ့။ ဆေးလိပ်ဆိုတာ ဆေး၊ ဆေးရိုး၊ ဖင်စီခံ(အစီခံ)၊ ဖက် လေးမျိုးပေါင်းရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အသွင်သဏ္ဍန်ပဲ။ ဆေးကို ဆေးလိပ်လို့ မခေါ်သလို ဆေးရိုး၊ ဖင်စီခံ၊ ဖက် တမျိုးစီကိုလည်း ဆေးလိပ်လို့ ခေါ်တာမဟုတ်၊ စိပ်လည်း စိပ်ပြတတ်တဲ့ ရှင်ဥာဏ၊ ပေါင်းလည်း ပေါင်းပြတတ်တဲ့ ရှင်ဥာဏ၊ အစိပ်နဲ့ အပေါင်းတို့ရဲ့ ဒြပ်ထု၊ ထူးခြားတဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခု ဖော်ထုတ်လို့ ဥပမာပြု၊ ရှုပ်နေတာတွေ ရှင်းကာထုတ်၊ ခန္ဓာသရုပ်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဆေးလိပ်ရဲ့ခန္ဓာ၊ ဓာတ်ဘူးရဲ့ခန္ဓာ သစ်ပင်ရဲ့ခန္ဓာ၊ တောရဲ့ခန္ဓာ၊ ခွေးရဲ့ခန္ဓာ၊ လူရဲ့ခန္ဓာ၊ ခန္ဓာတွေ . . . . . ခန္ဓာတွေ . . . . ခန္ဓာတိုင်းရဲ့ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တကို ခန္ဓာလုပ်ရမှာမဟုတ်။ ကံခန္ဓာ တစ်ခုတည်းသာလျှင် အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တရှုပွားထိုက်တဲ့ခန္ဓာ။
တရားနေအောင် အားထုတ်လိုကြသူတွေ အာရုံပြုရမယ့် ခန္ဓာက ကံခန္ဓာ။ လူသားလောက ကြီးတစ်ခုလုံးကို ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်ဖြစ်အောင် မိသားစုတွေကို သွေးကွဲအောင်၊ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ ကုလား၊ ဗမာ၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ တရုတ် . . . အစစတွေကို ဇာတ်စနစ်သွင်းပေးနေတာ ကံခန္ဓာ၊ လူကို လူ့လောကထဲကနေ ထွက်ပြေစေချင်အောင် လုပ်ဆောင်နေတာ ကံခန္ဓာ။ …. ကဲ . . . မိတ်ဆွေ . . .
ကံခန္ဓာဆိုတာ လူလည်းမဟုတ်၊ ရုပ်လည်းမဟုတ်၊ နာမ်လည်း မဟုတ်၊ ရုပ်နဲ့ နာမ်ပေါင်းထားတဲ့ လူ။ အဲဒီလူက ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ အမှု။ အမှုတွေမှာ လက္ခဏာတွေ ရှိတယ်။
တရားအားထုတ်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဒီအမှုတွေမှာ ဦးစွာ ငြီးငွေ့ရမှာပါ။ ငြီးငွေ့ရမှာ မဟုတ်တဲ့ ခန္ဓာတွေမှာ သွားပြီး ငြီးငွေ့ မိရင် ခုတ်ရာ တခြား၊ ရှရာတခြားဖြစ်ပြီး လွတ်မြောက်ဖို့ အားထုတ်ခါမှ ရုန်းမရ၊ ကန်မရနဲ့ ကံချောက် (ဂျောက်) ထဲ ကျနေကြတဲ့ အဖြစ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတော့တာပါပဲ။ သတ်ကြ၊ ဖြတ်ကြ၊ ဖိကြ၊ နှိပ်ကြ၊ ကြောက်ကြ၊ မျှော်ကြ . . .
အမှု (ကံခန္ဓာ) တွေရဲ့ လက္ခဏာကို ကြည့်တတ်၊ မြင်တတ်ပြီဆိုပါမှ ကံခန္ဓာတွေ ဘယ်ကလာတာလဲ . . . ၊ သူ့ရဲ့ လာရာလမ်းကို လိုက်ရပြီပေါ့။ မြတ်ဗုဒ္ဓကရော ဘယ်လို လမ်းပြခဲ့ပါလိမ့်။ ကိလေသာကြောင့် ကံ၊ ကံကြောင့် ၀ိပါက်၊ ၀ိပါက်ကြောင့် ကံ . . . ကံကြောင့် ၀ိပါက်၊ ၀ိပါက်ကြောင့် ကိလေသာ၊ ကိလေသာကြောင့် ကံ . . . အမှုခန္ဓာ (၀ိပါက်) ရှိလို့ အမှုခန္ဓာကို ဆာလောင် (ကိလေသာ) ပြီး အမှု (ကံမ္မ)ကို ပြုလို့ အမှုခန္ဓာ (၀ိပါက်) ပေါက်ပြီး လူဟာ အမှု ၀ဲသြဃထဲမှာ တခြာရစ်ရစ်နဲ့ မရပ်မနား ပြေးလွှား နေရတော့တာပေါ့။ ဒါဟာ လူ့ဒုက္ခပါပဲ။
တရားရဲ့ အာရုံကို ဒီလိုခက်ခက်ခဲခဲ ဖော်ထုတ်ခဲ့သူ
ရှင်ဥာဏ . . . မြစ်ကြီးနား ထောင်ထဲမှာ ။
သူ့တပည့် ကျုပ်လည်း ညံ့ခဲ့တယ်ဗျာ ။
အခုတော့ သူဖောက်ခဲ့တဲ့ လမ်းကို ကူဖောက်နေပါပြီ . . . . . ။
ပြောပြောနေကြတဲ့ ခန္ဓာဆိုတာ ဘာပါလိမ့် …?
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရုပ်လုံးပေါ် မှန်ကြီးထဲ ပြန်ကြည့်လိုက် ..
ဒါ ခန္ဓာပဲ ..။
ဟုတ်ပါတယ် .. အဲ့ဒါလည်း ခန္ဓာတစ်ခုပါပဲ ..
သိုပေမယ့် နောက်ထပ် လေးခု ကျန်နေပါသေးတယ် ..
ထားပါဦး .. မှန်ထဲက ခန္ဓာကိုပဲ ပြောကြည့်ပါမယ် ..
အဲ့ဒီ မှန်ထဲက ခန္ဓာ (ကိုယ့်ကိုယ်လုံးကြီးပေါ့ဗျာ) ကို တစ်နေ့တစ်နေ့ သ,ပေးနေရတယ်။
မသဘဲနဲ့လည်း မနေကြဘူး၊ ပျိုပျိုအိုအို လှချင်သေးတာကိုးးးး
ဒီခန္ဓာကြီးကို မစွဲလမ်းဘူးလား မေးကြည့် …
စွဲလမ်းတာကို နမူနာ ပြရရင် …
ကိုယ့်ခန္ဓာမဟုတ်တဲ့ သူများ ခန္ဓာကိုတောင် လှတယ်ထင်၊ ပြီးတော့ စွဲလမ်း၊ စွဲလမ်းတော့ ရအောင်ယူ၊ ယူတော့ ကလေးတွေရ ..
ဒါက ရုပ်ခန္ဓာကို စွဲလန်းပုံပါပဲ။
အဲ့ဒီလို စွဲလန်းတတ်တဲ့ ခန္ဓာမို့ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ လို့ ခေါ်တာပါတဲ့ ….
ဒါက ဖွတ်ကျားဖြစ်တဲ့ ကျုပ်က နားလည်သလောက် ပြောကြည့်တာပါ …
စာတတ်ပေတတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဆို ဒီထက်ပိုမှာ အမှန်ပါပဲ …
ဖတ်၊ မှတ် သွားပါတယ် ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
” တရားနေအောင် အားထုတ်လိုကြသူတွေ အာရုံပြုရမယ့် ခန္ဓာက ကံခန္ဓာ။ လူသားလောက ကြီးတစ်ခုလုံးကို ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်ဖြစ်အောင် မိသားစုတွေကို သွေးကွဲအောင်၊ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ ကုလား၊ ဗမာ၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ တရုတ် . . . အစစတွေကို ဇာတ်စနစ်သွင်းပေးနေတာ ကံခန္ဓာ၊ လူကို လူ့လောကထဲကနေ ထွက်ပြေစေချင်အောင် လုပ်ဆောင်နေတာ ကံခန္ဓာ။ …. ကဲ . . . မိတ်ဆွေ . . .
ကံခန္ဓာဆိုတာ လူလည်းမဟုတ်၊ ရုပ်လည်းမဟုတ်၊ နာမ်လည်း မဟုတ်၊ ရုပ်နဲ့ နာမ်ပေါင်းထားတဲ့ လူ။ အဲဒီလူက ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ အမှု။ အမှုတွေမှာ လက္ခဏာတွေ ရှိတယ်”…….တဲ့…………….
မှားရင်လည်း….” သာသာ့ ” အမှားပါ….နော်………………..။
အစွန်းဆို ဘာအစွန်းမှ မကောင်းပါ၊
သို့သော် လူသည် တခါတရံ အစွန်းရောက်တတ်ပါ၏။
ထို့ကြောင့် အစွန်းချွတ်ဆေး ကောင်းကောင်းဆောင်ထားဖို့လိုလေသည်။
အော် မိုးပြာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်မိတဲ့ မိမယ့် မိန်းမတွေကိုပဲ သနားမိတယ်ဗျာ
ပြီးရင် ၂ဦး၂ဘက် ကောင်းဖို့ဆိုပြီး fucking ကို 69တွေနဲ့ဆွဲလိုက်ကြနဲ့ ….
ချောင်းကြည့်ပြီး ဖူးကားအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ချင်တာ
အဲဒီလောက်တောင် မိုက်ရိုင်းစုတ်ပြတ်တဲ့ အယူအဆဆိုလျှင် ပေါ်ပေါက်လာစရာ အကြောင်း
မရှိနိုင်ပါဘူး။ ထေရဝါဒ သံဃာထုတစ်ခုလုံးရဲ့ အလေးအမြတ်ထားရာ သံဃာ့မဟာနာယက အ
ဖွဲ့ကြီးကို အဦးမူတိုင်တည်ပြီးမှ မြန်မာပြည်အကျိ်ုး ကမ္ဘာအကျိုးငှ မိမိရဲ့ကိုယ်ကျိုးကို စွန့်လွှတ်ပြီး
အန္တရယ်တွေကြားထဲကနေ ခက်ခက်ခဲခဲရပ်တည်လာခဲ့ရတာကိုတော့ တကယ်လေ့လာကြည့်
ဟာ…… ခံတာတွေ အတော်များပါလား.. ကျုပ်တော့ မခံတော့ဘူးဗျို့..ပြန်ချမယ်..
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒီ မောင်မိုးပြာရေ ခင်ဗျားဆရာရှင်ဥာဏ
လူ လူချင်းသင့်မြတ်နေရင် အရိယာဖြစ်ပြီး မသင့်မြတ်တဲ့ချိန်
အရိယာ အဆင့်ကပြုတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ခင်ဗျားတို့
၀ါဒအရဆို အခုခင်ဗျား အရိယာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။
ဘယ်အရိယာတွေများ လူတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်နေတယ်လို့ ကြားမိလို့ပါလဲ ????
လောကကြီးမှာ ပြေလည်အောင်နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာတွေပါပဲ . . .။
ိ်ှွိှုအီကား မောင်ဂွ၏ အာဘော်တည်း . . . ။
ဗမာပြည်မှာ အရိယာနာမည်ခံပြီး လိုက်ရန်ဖြစ်နေကြတာတွေ
(လူ လူချင်းသင့်မြတ်နေရင် အရိယာဖြစ်ပြီး မသင့်မြတ်တဲ့ချိန်
အရိယာ အဆင့်ကပြုတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထား) တယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ကြည့်ချင်းအားဖြင့်
ခေတ် လုလင် ဆိုသော သူသည် တရားကိုသေသေချာချာ မလေ့လာပဲ သူများပြောသံကြားဖြင့်
စွပ်ရွတ်ပြောဆိုတတ်သူဖြစ်ကြောင်း အကဲခတ်လို့ ရပေသည်။
ခေတ်လုလင် ပြောတဲ့ လူ လူချင်းသင့်မြတ်နေရင် အရိယာ၊ မသင့်မြတ်တဲ့ချိန် အရိယာအဆင့်က ပြုတ်တယ်လို့ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒီဆရာတော် ရှင်ဥာဏ ရေးတာ ဘယ်စာအုပ်လဲဗျ၊ စာအုပ်နာမည်လေး သိရင် ပြောပေးပါဗျာ။ ကျွန်တော် ဖတ်ကြည့်ချင်လို့ပါ။ သဘောရိုးနဲ့မေးတာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့..တရက်၂ရက်ကတင်… .ကွန်ပျုတာ…ဦးနှောက်တို့.. အတွေးအခေါ်ဆက်စပ်မှု research လုပ်နေတဲ့.. အဖွဲ့အစည်းတခုကလူနဲ့..စကားပြောဖြစ်လိုက်လို့ပါ..
ခရစ်ယန်အတွေးအခေါ်..အယူအဆနဲ့.. စိတ်(နာမ်)ကို..ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုက်နေတော့.. သိပ်မပြည့်စုံသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားမိတာကို.. ကျုပ်လည်း… ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်နဲ့ရှင်းပြချင်ပေမဲ့… မရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူး..
မိုးပြာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့.. ပဋိစ္စသမုပ္ပါ ဒ်စက်ဝိုင်းကို.. အင်္ဂလိပ်လို.. ရှင်းထားတာလေးရှိရင်.. ညွှန်းစေချင်ပါကြောင်း…
ဘာကားစီးစီး ..ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ကားသစ်ကြီးဘဲစီးစီး ..
ကားအသစ်ကြီးမို့ .. ဆိုဖာတွေက အိအိညက်ညက်မို့.. စပါယ်ယာတွေက အပြောကောင်းလို့မို့…
အဆင်ပြေတယ်ထင်ပြီး တက်စီးမယ် ဆိုရင်လဲ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ ခရီး ရောက်ရဲ့လားလို့ သေသေချာချာ မေးစေချင်သည် ..။
လူစီးများ ခရီးသွားပေါသော ကားလိုင်းများမှာ စပါယ်ယာက အတင်းဆွဲခေါ် လေ့မရှိပါ ။ ကားလဲစုတ်သလို မြင်တတ်ပါသည်..။